बेपत्ता भएका ओमराज पौडेल खोइ ?Samachar Pati
बेपत्ता भएका ओमराज पौडेल खोइ ?
ओमराज पौडेलको मोबाइलमा ६८ पटक फोन हान्ने को हो ? १ महिलाको संलग्नता रहेको प्रहरीको भनाई ! हेर्नुहोस यस्तो रहस्य बाहिरियो
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालयका बरिष्ठ अधिकृत ओमराज पौडेल विगत केहि हप्ता देखि सम्पर्क विहिन भएका छन । उनको खोजी कार्यमा सबै जुट्न पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालयले आज (शनिबार) पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आव्हान गरेको हो ।
प्रमुख जिसीले पौडेललाई काममा प्रेसर दिएका कारण घट्ना घटेको भन्ने आरोप तथ्यहिन भएको दाबी गरे । यसअघी नेपाली कांग्रेस र स्थानिय तह कर्मचारी युनियन नेपालले विज्ञप्ती निकाल्दै महानगरपालिकामा काममा परेको दवाब र टर्चर दिदा घट्ना घटेको आरोप लगाएको थियो । मेयर जिसीले अधिकृत पौडेल वेपक्ता भएको बिषयमा आफुहरु गम्भिर भएको बताउदै उनी बेपक्ता हुनुमा महानगरपालिका र आफुहरु कुनै कारणले पनि दोषि नरहेको प्रष्ट्याएका हुन।
सुष्मा कार्कीका १ दर्जन गीतहरु एउटै भिडियोमा
वास्तबिक घटनामा आधारित मेनुका पौडेलको गीत “तिमी मरेर” सार्वजनिक (भिडियो सहित )
रितिका जिरेलको नयाँआधुनिक गीत “सारीको छेउ” सार्वजनिक (भिडियो)